Seals and Embossers for Corporations and LLCs
Ny marika / Corporate Embosser / Custom Embosser tsara tarehy dia tafiditra ao amin'ny kitapo Corporate sy LLC. Vita amin'ny vy na maivana ary mora ampiasaina, tombo-kase ara-barotra toy ny antsika dia mety takian'ny fanjakana maro ho an'ny fifanakalozana sasany.
Raha te-hanome tolotra orinasa, azafady miantsoa ny sampan-draharaham-pifandraisan-tsainan'ny mpanjifa Mon-Fri eo amin'ny 6: 00AM sy 5: 00PM Pacific Time amin'ny:
Na azonao atao ny mampiasa ny taratasy fangatahana napetrakay eto: Mametraha fehezin'ny Corporate
Seal Corporate Corporate Seal - $ 56
Ity modely ity dia nanjary nalaza noho ny halavany sy ny fampiasana avo lenta izay manome tsindrim-peo mahery sy mahitsy eo amin'ny tahiry misy tahiry.
Desktop Seal - Desktop 96
Ity modely ity dia natao hametrahana tsindry mafy amin'ny ezaka kely. Azo itokisana amin'ny famoahana matetika ny dokam-barotra matetika sy avo lenta.
Sarintanin'ny Corporate Heal - Duty - $ 72
Ity tombo-kase ho an'ny orinasam-pandraharahana lehibe kokoa io dia manome bebe kokoa ny fampiasana azy ary mamela ny fandefasana sary lehibe kokoa. Tsara ho an'ireo antontan-taratasy be dia be.
Elefant Corporate Seal - $ 96
Ny tsara tarehy vita vita tsara, ny mpandrafitra metal-boky dia mampiavaka ny orinasa na orinasa orinasa. Ireo mpandrafitra eo amin'ny birao dia metaly, avy eo voaaro amin'ny tànana mba hahatonga azy ho tsara tarehy. Afaka amin'ny endriky ny endriny vita amin'ny boaty izy ireo, vita amin'ny loko volamena 24K na vita amin'ny plastika.